Siyaasi u dhashay Zimbabwe oo magengelyo looga diid Zambia | Biyoguurenews.com
Home Wararka Siyaasi u dhashay Zimbabwe oo magengelyo looga diid Zambia
Siyaasi u dhashay Zimbabwe oo magengelyo looga diid Zambia
Wasiirka arimaha dibadda ee dalkaas, Joe Malanji, ayaa sheegay in sababaha uu Biti ku saleeyey codsigiisa magangelyo doonka ahi ahaayeen kuwo aan lagu qanci karin. Hase yeeshee qareenka u doodayey Biti ayaa sheegay in aanay ilaa haatan wax jawaab ah ka helin xukuumadda Zambi a.
Waxa uu BBC-da u sheegay in hadii magangelyo la siin waayo ninkaa u wakiilka u yahay uu codsan doono in xaq loo siiyo inuu dal kale u dhaafo Zambia. Waxaanu ku dooday in Biti aanu wax khatar ah ku ahayn Zimbabwe.
Biti oo xubin ka ah isbahaysigii doorashada lagaga adkaaday, ayaa waxa lagu eedeeyey in uu abaabulay qalalaasihii dalkaa ka dhacay doorashooyinkii uu ku guulaystay madaxweynaha talada haya Emmerson Mnangagwa ka dib.
Previous articleTaariikh Nolaleedka Ninka da,da yar ee Madaxwaynaha Looga Doortay Kililka Sooomaalida Itoobiya
Next articleXildhibaan Axmed Gacan oo murugo ka muujiyay xaalada dhaqn dhaqaale iyo siyaasadeed ee somalilnd ,Siyaasiga Cirro,na ku taageeray go,aankiisa ah